पूजा नभन्नु मलाई आमिना भन्नुहोस्,
December 23, 2013 Mohammad Ibrahim
पूजा लामाले इस्लाम धर्म कबुल गर्नु भयो
कुन चीजबाट प्रभावित भएर तपाईले इस्लाम स्वीकार गर्नु भयो ?
के तपाई यी मिडियाको यस्ता दुष्प्रचारबाट प्रभावित हुनु भएन ?
सत्य यो हो कि मिडियाले इस्लाम विरुद्ध दुष्प्रचारको कारण नै मैले इस्लम धर्म स्वीकार गर्न पाएँ किनकि मैले अध्ययनको गर्दा इस्लामलाई मिडियाको दुष्प्रचारको विपरीत एउटा उत्तम धर्म र आदर्श संस्कार पाएँ र अब म ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छु कि इस्लाम संसारको एक मात्र यस्तो धर्म हो जो मानवता र शान्तिलाई प्रोत्साहित गर्छ र न्याय-इन्साफ गर्दछ।
तपाई फिल्मी संसारसँग जोडिनु भएको छ र तपाईसँग सम्बन्धित स्केण्डल काण्डको समाचार आएको थियो। एक पटक त तपाईले आत्माहत्या गर्ने प्रयाश गर्नु भएको थियो । तपाई सम्बन्धमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
पूजा जी, इस्लाम स्वीकार गरेपछि तपाईको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन देखा परेको छ । तपाई हिजाब (पर्दा) लगाउनु हुन्छ, मादकपदार्थ पीउन र धुम्रपान सेवन गर्न छोड्नु भयो। के तपाई अल्लाहसँग आफ्नो विगतको गल्तीको प्रायश्चित गर्दै हुनुहुन्छ ?
इस्लाम स्वीकार गर्न तपाईलाई कुन चीजले आकर्षित गर्यो ?
तपाईले इस्लाम स्वीकार गरेपछि परिवारको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
इस्लाम स्वीकार गरेपछि मिडियाले त यो भनेका होलान कि त्यसले कुनै मुस्लिम व्यक्तिसँग प्रेम गरेकी होली र उसँग विवाह गरेकी होली, यसैले इस्लाम स्वीकार गरेकी होली। के यो सत्य हो त ?